आजको सूचनाको युगमा सबै विषय सूचनाका क्षेत्र बनेका छन् । सूचना नै शक्ति बनेको छ । तर, गलत सूचना सम्प्रेषण गरी ‘सूचना आतंक’ मच्चाउने पक्षमा हामी छैनौं र कदापी हुने छैनौं । हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पत्रकारिताको मूल धर्म निभाउनेछौं ।
नेपाली मिडियाको दुनियामा नयाँ आयामको रुपमा सेरोफेरो डट कम अनलाइन अखबार को औपचारिक शुरुवात भएको छ । कुनै समय थियो । घटना भएको कसैलाई थाहै नहुने । छापा माध्यामको शुरुवात भएपश्चात् संकलित समाचार मासिक, पाक्षिक र साप्ताहिक रुपमा जनताकहाँ जान थाले अखबारमार्फत् । थुप्रै दिनसम्म चौतारीहरुमा छलफलका विषय हुन्थे अखबारका सामाग्रीहरु ।
विस्तारै दैनिक पत्रिकाहरुको प्रकाशन हुन थालेपछि मानिस दैनिक रुपमा समाचारमा अभ्यस्त हुन थाले । समाचार ‘सेन्स’ बढ्दै गयो । यो पनि समाचार बन्न सक्छ भन्ने चेतनाको विकास भयो । जनमानसमा समाचारयोग्य सामग्रीको छनौट र पहिचान हुन थाल्यो क्रमशः ।
समयले मानिसलाई यतिमा मात्रै सिमित भएर बस्न दिएन । बैज्ञानिक विकासको युगमा सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्‍यो । छापामा दिनभरिका समाचार छापिन्थे भने रेडियोमा घण्टा घण्टामा समाचार प्रसारण हुन थाले । यतिले मात्रै कहाँ हुन्थ्यो र ? विकासको क्रम निरन्तर अघि बढ्यो । हामी छिनछिनमा अपडेट हुन थाल्यौं– अनलाइनमार्फत् । यही अपडेटको निरन्तरता हो अनलाइन अखबार सेरोफेरो डट कम । समाचारका लागि कहिं कतै जानुपरेन । स्मार्ट फोनमार्फत हामी सबैको हातहातमा पुग्नेछौं । हातबाट आँखाको बाटो हुँदै मनसम्मै पुग्ने प्रयत्न गर्नेछौं ।
आजको सूचनाको युगमा सबै विषय सूचनाका क्षेत्र बनेका छन् । सूचना नै शक्ति बनेको छ । तर, गलत सूचना सम्प्रेषण गरी ‘सूचना आतंक’ मच्चाउने पक्षमा हामी छैनौं र कदापी हुने छैनौं । हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पत्रकारिताको मूल धर्म निभाउनेछौं । हामी जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नेछौं । सीमित सरकारको अवधारणा अनुरुप राज्यको व्यवहार छ छैन ? नजिकबाट हेर्नेछौं । आवश्यक पर्दा सचेत गराउनेछौं, खबरदारी गर्नेछौं र जनताका पक्षमा लाग्नेछौं । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि हामी हाम्रो मूल धर्म भने विर्सने छैनौं । हाम्रो पक्षधरता विर्सने छैनौं । मिडिया निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छैनौं । हाम्रो पक्षधरता सत्य, न्याय र शान्ति हो ।
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१७ को अवसरमा हामी यहाँहरुसमक्ष औपचारिक रुपमा अनलाइन अखबार सेरोफेरो डट कम लिएर आएका छौं । यहाँहरुको अमूल्य सुझाव र सहयोगको हामी सदैव सम्मान गर्नेछौं ।
२०७४ बैशाख २० (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस) मा प्रकाशित